Umklami wezambatho uRuth Myers naye waba ngumdlali omkhulu "wokuqala okumnyama", ngoko wayesebenza ngokuvuyisa kunye nomsebenzi onomthwalo omkhulu kumsebenzi. "Indleko enhle ngokwenene ayifanele ikwazi ukuxelela kakhulu ngeqhawe lakho, kufuneka ixelele umdlali weentlobo eziza kubakho kwaye ngaloo ndlela yenza kube lula ukusebenza kwendima," kuchaza ingcamango kaRute.
Lo msebenzi wawuququzelelwe kakhulu kukuba nangaphambi kokuba umsebenzi kwifilimu wayesebenokuqonda kakuhle bonke abalinganiswa.
"Ngenxa yeengubo zikaLyra e-Oxford, ndasebenzisa imibala engaphambi kweRaphelite, endicinga ukuba ikhona kwincwadi," kusho uRute. "Yaye xa ehamba eLondon aze atyelele kwihlabathi likaNksk. Colter, uzama ukumlingisa kuyo yonke into, ukuba abe ngumbono wakhe. ULyra udibanisa ngokutsha kwihlabathi elitsha kwaye ngokukhawuleza ukhangele kwaye aziphathe ngendlela efanayo. " Kuba uNicole Kidman, odlala umdlalo omhle, kodwa onobuhlungu uNkosikazi uColter, uRute wadala iingubo ezimnandi kakhulu.
"Kwimeko yam yokuqala, ndibonakala ngengubo ebushushu," u-Nicole kamva wathi ngendlebe nodliwano-ndlebe. - Ukuba ndanikezelwa ukuba ndiyigqoke ngobomi bokwenene, ndiyakwenqaba. Ndade ndixhalaza kuChris: "Ndiyintloni!". Kodwa le ngubo yandinceda ndayiqonda i heroine, kuba uRute, ecinga ukugqoka, ucinga egameni lakhe. " Uthi u-Rick Myers uthi: "Iimpawu zokuqala ngokuthatha inxaxheba kubalinganiswa zibaluleke kakhulu, kuba zinika ingcamango yabalinganiswa babo, bazise abaphulaphuli kubo.
Kwimeko yakhe yokuqala, uNksz Colter ubonakala eengubo ezigubungelayo kwaye zikhanyisa, egxininisa ubuhle bomzimba wakhe. Esi sigqoko sithetha ngokwalo-enye yeentanda zam. "
Ukusebenza nomfanekiso kaNksk Colter, umyili wezambatho uRuth Myers kwakumelwe akhe phezu kwenkcazo enomxholo owawumele le heroine njengowesifazane oyinyaniso. Njengesiqulatho sababhinqileyo, wathatha uGrta Garbo noMarlene Dietrich. UDaniel Craig kwafuneka avele emfanekisweni weNkosi yesiNgisi iNkosi uAzriel. Ngomzimba wakhe kunye nobabalo bokunyakaza, kwakungekho nzima, kodwa ngelo xesha iinqwelo zimele zigxininise amandla kunye nokulawula kwalo mlingiswa, kunye nomdla wokunyaniseka nokungahoywa iindibano. "Xa ndiqala ukwenza iingubo zeNkosi uAririel, ndamcingela njengeqhawe likaRussia," kusho uRute. Kodwa xa ndafunda ukuba uDaniel Craig uvunyiwe ukuba athathe indima, umbono wam wawushintshile. Ndasebenza naye ngaphambili kwaye ndazi ukuba loo mfanekiso ayiyi kuhambelana naye. Emva koko ikhethi lam liwele kwi-tweed: ngakwesinye icala, libonakala likhulu kakhulu, kwaye ngakolunye uhlangothi lukhululekile, kuba besuka ku-tweed sasidla iingubo zokuhamba nokudlala imidlalo. "
Ngaloo ndlela umfanekiso omtsha wabelelwa ngumyili wezambatho uRuth Myers, umhambi onobuchule kunye nomqhubi we-polar njengo-Amundsen noScott. U-Azriel wayesalindela ubuqhawe, kodwa lo buqhawe buba luncedo. URuth wayemthanda ukusebenzisana noogqirha-ikakhulu ngenxa yembono yabalinganiswa. La madoda anesibindi, ahlomile ngamagqabi kunye neminquba, aphila iminyaka emininzi, akayi kuvala ubushushu okanye kubanda kwaye angakwazi ukundiza. Imifanekiso ye-pre-Raphaelites nayo ilala ngokusekelwe kwimifanekiso - ingakumbi imifanekiso yabo yama-fairies kunye namaqhawe eengcali. Ekubeni abagqwiranga abazizwa bebandayo, bembethe izambatho eziluhlaza ezenziwe ngobumba obumnyama, ziqhuma emoyeni.
Umsebenzi kwiingubo zathatha ixesha elide kumyili wezambatho uRuth Myers, kodwa akazange azame. Kwaye umvuzo awuzange uzigcine ulinde. "Xa uPhilip Pullman efika egumbini lokugqoka," kamva wakhumbula, "iifolokhwe zam zazama. Emva kwayo yonke into, kwiincwadi zakhe, iingubo azicatshangwanga, kuphela: "wayeseengubo ezimnyama" okanye "wayegqoka ingubo emadolweni". Ndazakhela mna kwaye ngoko ndatshitshisa kakhulu ukuba uya kuthi yonke into ayilunganga. Kodwa yena, ngokuzithoba, wahamba ejikeleza egumbini, ekhangele kwiimpahla ezihlukeneyo. Ndandibuza ngeentloni: "Ngaba uyayithanda?". Wayephendula wathi: "Aphezu kwam ngcamango. Yiloo nto endiyifunayo, kodwa andizange ndibonise kwiincwadi zam. " Ngoko, oku kukuncoma ngakumbi kum ubomi wam! ".
Nangona umsebenzi ophefumlelweyo kunye nokuzinikezela weqela lonke lefilimu, uxinzelelo lweCawa ludlale indima. Phantse iqela elichasene necawa lisuswe kwifilimu, elichaphazela kakubi isakhiwo. "I-Golden Compass" yahluleka kwi-ofisi yebhokisi e-US, kwaye nangona eqokelele imali efanelekileyo kwamanye amazwe, iChnema yeNew Line yavuma ukudubula. Kodwa umbhali we-trilogy uFilip Pulman wayenelisekile ngokulungelelaniswa-emva koko, kwanika izigidi zabantu ukuba zijonge kwihlabathi lakhe elimangalisayo kweso iliso elinye. Kwaye ekupheleni kwebali, banokufunda rhoqo kwiincwadi!
UMariah Carey - i-albhamu entsha iya kukhutshwa ngo-Apreli 15
Umbukeli weTV uDarya Spiridonova
UTil Schweiger - umdlali odlawayo kunye nentandokazi yabasetyhini abaninzi
UStephanie Joanne Angelina Germanotta
Biography ka Yuri Nikulin
Abadlali abathandekayo be-cinema yehlabathi, ngo-2011
Indlela yokufunda ukuhlala kumtya?
Kuthetha ukuthini ukuxolela?
Cosmetics kwiintlungu zokulahleka
Ziziphi iimpahla eziphathekayo zowesifazane omncinci
Igama elitsha: imihlobiso yejometri JD.Julia Davidian
Imifuno: izibonelelo, ukwenziwa kwamakhemikhali
Itayi kwiingxowa: iingeniso, ingozi, imithetho yokusetyenziswa
Imihla yeenwele, iingcebiso zomntu
Inkomfa yokuzivocavoca kwe-osteochondrosis
I-Chilli, i-nati kunye ne-sweet pepper sauce
UClaira uyindlela yokukhulelwa ethembekileyo nge-estradiol
Ubundlobongela obungenakulibaleka elwandle